Ikhaya AMERICAN STARS Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele yeGoal Stopper owaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "I-Brick Wall". Indaba yethu ye-Ederson Moraes Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angakhulumi ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi nge-Goal Keeping Reflexes yakhe kodwa abambalwa bacabanga ukuthi i-Ederson Moraes 'Bio yethu iyathandeka kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
U-Ederson Santana de Moraes wazalwa ngosuku lwe-17th ka-Agasti 1993 e-Osasco, eSão Paulo, eBrazil. Ukukhuliswa kuka-Ederson kwakunzima ngokwezezimali eBrazil. Wazalwa nabazali abampofu abangenakuhlinzeka okuningi kodwa bavumela ibhola njengento yokugcina.
Kusukela ngenkathi eseyingane, wonke umuntu kuhlanganise nomqeqeshi wakhe wayembiza njalo "I-Bull". Lokhu kungenxa yokuthi Ibhola lilokhu lilokhu libomvu lakhe elibomvu kanti u-Ederson osemusha wenza ikhono lokukhokhisa e-rag yakhe.
Isimangaliso sakhe sifike lapho esedulela ibhola ngendlela eqondile ekukhaleni kwakhe okude, efaka ibhokisi lakhe ebusheni. U-Addin lokhu engakwazi ukukhokhisa abashayeli, ucingo oluvela eYurophu luze lubonga uBenfica scouts oye waba nesithakazelo esikhulu kulo mdlali omncane. Ekhulile nje nge-16, u-Ederson wenza ushintsho ngaphesheya kwe-Atlantic eya eBenfica, ejoyina iqembu lika-Lisbon club. Wazizwa ekhululekile kakhulu neBrazil yabo enjengezindawo ezizungezile.
Ikhefu lakhe elikhulu laseYurophu lithatha isikhathi. Ngesikhathi esithile, u-Ederson wavunyelwa ukuba ashiye i-Ribeirao ephansi ngemva kweminyaka emibili ngehlangothini elincane lika-Primeira Liga. Kuleli qembu, waba yiyona engcono kakhulu futhi eqhubeka edlala iRio Ave. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuba uBenfica abe nesithakazelo kuye futhi.
Uqale eqenjini labo leqembu 'B' futhi wabonisa inombolo efanelekayo. U-Ederson wadlala kanye noBernardo Silva osetshenziselwa ukujoyina iqembu elisha laseBenfica. U-Ederson wabhekana nezinselelo ezinkulu lapho ehamba ohlangothini oluphezulu. Inselele enkulu kunazo zonke kwakukhona ukuba khona komuntu Julio Cesar, umgcini we-veteran ohlotshisiwe, ophakathi kwezikhalazo.
I-Inter Milan yangaphambili yayisembukisweni ku-2015, ithola isandiso sokwenza isivumelwano nge-2018. Kodwa-ke, lapho kufika u-Ederson ithuba lakhe walithatha. Kamuva uCesar waqala umsebenzi wakhe ongenandaba nomuntu osemusha kusukela ngaleso sikhathi.
Naphezu kwentsha yakhe, u-Ederson wayenempumelelo enkulu, ngokuwina kabili i-Primeira Liga. Ngesinye isikhathi, iqembu lakhe lihle kakhulu njengoba lihlula iZenit St Petersburg ku-Champions League. Lokhu kusetha i-quarter-final neBayern Munich elaliphathwe yilo Pep Guardiola. U-Ederson wabhekana nomphathi wakhe wesikhathi esizayo Pep Guardiola njengoba uBenfica elahlekile kancane emilenzeni emibili nomdlali odlala kahle. Lokhu kuphelile I-Pep uthando ngaye. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Umkami u-Ederson Moraes uyamangalisa kakhulu. Bheka i-Lais Moraes enhle, inkosikazi yobuhle obuhle.
Bashade iminyaka emine futhi bobabili babe nendodakazi yabo yokuqala okuthiwa uJasmin. Lapho u-Ederson wajoyina uMan City, wonke umuntu akazange ambuke ngempela. WayenguBrithette umkakhe uLais abalandeli abazobona. Bobabili abathandi bavame ukuthumela ama-cute snaps ku-Instagram ebuhlotsheni babo.
I-Lias Moraes enhle ibonakala njalo emaqenjini amnandi kumuntu wakhe.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
U-Ederson Maraes unesici esilandelayo kubuntu bakhe.
Ama-Ederson Maraes Amandla: Uhlakaniphile, unesithakazelo, unomusa, unenhliziyo efudumele, ujabule futhi kunjalo, ehlekisayo.
Ukukhubazeka kuka-Ederson Maraes: Wayengaba namahloni, azikhukhumeza, enenkani lapho ecasulwa.
Lokho u-Ederson Maraes akuthandayo: Ngokuqinisekile, uyathanda ukunikeza usizo kwabampofu, indawo yaseshashalazini, ukuthatha amaholide nokuzijabulisa nabangani
Okushiwo ngu-Ederson Maraes: akazithandi ukunganakwa, ebhekene neqiniso elinzima.
Ngokufingqa, u-Ederson uyamangalisa, udala, uyazethemba, unamandla futhi unomuntu onzima kakhulu ukumelana naye. Ngaphandle kwesimo, unamahloni kakhulu kodwa ngaphakathi enjengengonyama elambile kakhulu. Ungumuntu okwazi ukufinyelela noma yini ayifunayo kunoma iyiphi indawo yokuphila ozibophezela yona.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -tattoo
U-Ederson unezimpawu ze-34 ezigwazwe emzimbeni wakhe. Lezi zithombe zinezincazelo ezihlukahlukene, kusukela emlandweni wakhe wamaKhristu, ezenzweni zakhe zebhola kanye nomndeni wakhe emuva eBrazil.
Eqala entanyeni yakhe, u-Ederson unesabha elihlabayo elizungeze i-apula yakhe ka-Adam ebonakala sengathi ichotshozwa yi-rose encane engezansi kwendlebe yakhe.
Esifubeni sakhe sibonisa ukholo lwakhe lobuKristu. U-Ederson unenjuba ehamba ngenhla kwezwi "Ngingoka Jesu" Ufaka umgexo wesiphambano ukuze aqhubeke nokuqinisa ukholo lwakhe lobuKristu.
Umlenze wakhe unguPutukezi we-Ligue League, ngokuwunqoba noBenfica ku-2015.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuhlangana
U-Ederson wenza 2.42 isindisa umdlalo ngamunye, uma kuqhathaniswa noClaudio Bravo 1.44, UDavid De Gea 1.81 noThobaut Courtois ' 1.52. Enye yalezi zinsindiso ihilela ukuthi asebenzise ukucabanga kwakhe okuqinile futhi abeke umsebenzi wakhe emgqeni njengoba kuchazwe ngezansi.
Isithombe ngezansi sibonisa ukuthi kwenzekani ngemuva kokuhlangana I-Sadio Mane.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Ukukhuluma nomama wakhe, ubaba, abafowabo nodadewethu abazi kahle u-Ederson, isithombe somuntu onokuthula, onomusa ukhula. Ukukhuliswa kwakhe kwakunzima ngokwezomnotho kodwa abazali bakhe balethe izindinganiso nokuziphatha esikhundleni. U-Ederson uvela emndenini wesizinda esingokwenkolo esinamandla esingokwenkolo.
Into eyodwa eyaziwa emndenini wakhe ukupha. U-Ederson uqobo unikeze cishe i-£ 10,000 eqenjini lakhe langaphambili le-Osasco maduzane ukusiza ukucacisa izikweletu zabo.
Ederson Moraes Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi Ongenzeka
Ngaphandle kokungabaza, u-Ederson ungumlindi wesibindi, onesibindi, onamandla, futhi onamandla. U-Ederson unamandla angokwenyama, izimpendulo ezinhle kakhulu kanye namakhono amakhulu wokudubula.
Wakha idumela njengengcweti yokulondoloza isigwebo ngesikhathi sakhe noBenfica. Kodwa-ke, uhlonishwa kakhulu ngenxa yokusatshalaliswa kwakhe kanye nekhono lebhola ezinyaweni zakhe. Lokhu ukulawula nokuzethemba ebhola kuyamsiza ukuba alondoloze ifa futhi ngokushesha adlale ibhola kusukela ngemuva emhlabathini ngezandla zakhe noma noma ngezinyawo - ngisho nalapho ebeka ngaphansi kwengcindezi. Naphezu kokukhula kwakhe, usuvele eseceleni ukwenza izinqumo zakhe, ukuvumelana, nokuziqhenya emgomweni, kanye nokukwazi kwakhe ukuhlela ukuzivikela kwakhe.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Ederson Moraes Childhood kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
I-Fred Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
UGabriyeli UJesu Indaba Yengane Yomntwana Plus Untold Biography Facts
U-Kevin De Bruyne Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
I-Ronaldinho Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Kwangathi 14, 2017